कानूनमा टेकेर विकासलाई बाधक पुर्याउने काम भयो : मुख्यमन्त्री पोखरेल – US Nepal News
तुलसीपुर । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विकासलाई पनि कानूनकै रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शुक्रबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको ‘जिल्लाको विकास, सम्भावना र चुनौती’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोख्रेलले संसद्बाट पारित भएको बजेट नै एउटा कानून हो भने ।
अहिले विभिन्न बहानामा विकासका कामहरु अवरुद्ध गर्ने कार्य भएको भन्दै यसले विकास र समृद्धिमा धक्का पुग्नेसमेत बताए ।। कानूनी तथा व्यावहारिक रुपमा मिल्ने कुरालाई मिलाएर विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेसमेत उनको भनाइ छ ।
व्यावहारिक पक्षलाई मिलाएर कानून कार्यान्वयन अगाडि बढाउनुपर्ने पोखरेलले बताए । “कानून संरक्षक हुनुपर्ने हो, तर त्यसलाई टेकेर विकासलाई बाधक पुर्याउने काम भएको छ”, उनले भने ।
अहिले दाङमा ढुङ्गाजन्य पदार्थ आपूर्ति नहुँदा समस्या भएको भन्दै यसलाई सहज बनाएर विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउनुपर्नेसमेत बताए ।
उनले पहिलो चौमासिकमा १५, दोस्रो चौमासिकमा ४० र बाँकी चार महिनामा विकास योजना पूरा गर्नुपर्ने बताए । अहिले कच्चापदार्थ उपलब्ध नभएको नाममा निर्माण व्यवसायीले विकास निर्माणको कामलाई ठप्प पार्ने गरेको भन्दै यसले विकासलाई ठूलो क्षति पु¥याउने बताए ।
ग्रेटर नेपाल जिन्दाबाद ! देश टुक्र्याउने दलालहरु: सिके,प्रचण्डे,शेरे र बाबुराम एकै हुन !
महेश नेपाल	 January 22, 2017